Insimbi engagqwali nehele negeleza factory - China insimbi nehele negeleza Abakhiqizi, abahlinzeki
I-SC-1606 Insimbi Engagqwali nehele ne-Drain eyenziwe ngumenzi we-china
* Kungenziwa ngokwezifiso ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
* Ukucaciswa okujwayelekile komkhiqizo kubhekisa kokulandelayo.
* Ukungenisa umoya, ukukhanyisa, ukushabalalisa ukushisa, okungasheleli, ubufakazi obuhle bokuqhuma.
* Kulula ukufaka nokuqaqa.
* Iphethini ingenziwa ngamakhasimende.
I-SC-1604 Anti-corrosion Stainless Steel Grating and Drain eyenziwe yifektri yaseChina
* Lo mkhiqizo unomthamo omkhulu wokuthwala umthwalo onempahla elwa nomthelela.
* Ikhava nozimele kuhlanganiswe nehenjisi. Kuyinto elwa nokweba, iphephile, futhi ivuleke kalula.
* Uma usebenzisa insimbi, indawo enkulu yokuvuza kwamanzi nge-hot-dip galvanizing surface treatment, ekhangayo futhi ehlala isikhathi eside.
* Ukubukeka okuhle, indawo ecwebezelayo
* Uhlobo lwensimbi nehele
W-ingcindezi ashiselwe nehele
L-ingcindezi ikhiyiwe ikhiyiwe
C-izisekelo Welding nehele
SC-1605 Engagqwali Perforated imbobo Drain Gratings
Le nsimbi engagqwali imbobo yokukhipha imbobo yenzelwa isiteshi esimise okwe-U sinokutholakala okungcono kunokwakheka kwendabuko kwe-V. Ojantshi begeji precast esiteshini banikeza lula lapho ufaka i- gratings.it kulula ukuyifaka. Futhi ngemuva kokufaka, inhlabathi ikhombisa kuphela izimbobo ezithile eziyisikwele. Ububanzi obungaphakathi bungaba ngu-100mm, 150mm, 200mm, 250mm kuze kufike ku-300mm.
Professional Metal zokwakha Engagqwali nehele
Le grating engagqwali ingenye yezinhlobo zethu ezidume kakhulu, ezenziwe nge-Triangle branch design. Lo mklamo unethuba lokwenza igebe lesikhala sendawo, kepha amanzi azohamba ngokushelelayo aqhathanise nohlobo olujwayelekile. Le ndawo iphephile ngisho nangezicathulo ezincane ezinesithende esiphakeme ongahamba ngazo.
I-ART.NOSC 一 1608 Marterial L W H Qeda i-SUS304 1000 150 25 I-Hairline SUS316
Izinga Lokwakha Eliphezulu le-304 noma i-316 Stainless Steel Grating sink ishaneli lensimbi engenasici
Insimbi Engagqwali Grating, yakhelwe ukuba multi-imigqa izimbobo flat, zikanokusho emfushane nge nice Exquisite bewumsebenzi is ikakhulukazi esetshenziselwa zasendlini futhi ourdoor. Insimbi engagqwali nehele iyatholakala ehlukahlukene design for umhlobiso futhi uhlelo amanzi, ukuhlangabezana yobuhle futhi ezingokoqobo konke okukodwa.
I-SC-1607 Isiteshi sokuhambisa amanzi esenziwe ngensimbi engagqwali I-Grrain Drainage Trench Cover
Insimbi Engagqwali Grating, eyaziwa nangokuthi ashiselwe insimbi Engagqwali Ibha Grate kuyinto enhle bewumsebenzi oluhle futhi iqine kuzo zonke izinhlelo zokusebenza ezithwele futhi isetshenziselwa ikakhulukazi ngaphakathi nangaphandle. Insimbi engagqwali Grating itholakala ezihlukahlukene eziveza bar Isikhala kanye nogqinsi kuye ngezicelo kanye nezidingo umthwalo.
SC-1603 Engagqwali abakhwabanisi Nge Uzimele
I-Stainless Steel Drain ene-Frame yenziwa ngokuthwala ibha ne-cross bar ngokuya ngohlelo lwensimbi oluyisicaba, ekuhlukaniseni umfutho ophakeme ekushiseni kwe-welder okushiselwe ngokusika, ukusika, ukuvula, ngaphezulu kwenqubo yokukhiya njengokucubungula nezidingo zamakhasimende kuphelile imikhiqizo.
Kwenziwe ngentando Okukhethekile Umumo Insimbi Engagqwali Grating amanzi esiteshini amanzi China Factory
Lolu hlobo lwensimbi engagqwali lwaka lwenziwa ngumklamo osindayo womsebenzi ukuze waneliswe ukuvikela ukugqwala, ukuqinisekisa ukuqina nokuthembeka. Yenziwe ngensimbi engenalutho engu-304 noma engu-316 ngensimbi enhle.
Ikhava Yokukhipha Insimbi Engagqwali
Ikhava yokukhipha yensimbi engagqwali ingathambeka ngokushesha, kulula ukufakwa, ngemilenze eguquguqukayo kanye ne-flange side.it Kulula ukuyihlanza, nesiphon esikhiphekayo nesembozo se-grate, ukufakwa nokusetshenziswa okuphephile, ngamacala abushelelezi.
I-SC-1611 Balustrade Handrail Post Pipe End Cap Izesekeli Zokuhlobisa Insimbi Engagqwali Ethuka I-Hemisphere End Cap Cap Fittings
Igama lomkhiqizo I-SC-1611 Balustrade Handrail Post Pipe End Cap Accessories Yokuhlobisa Insimbi Engagqwali Yokwakha I-Hemisphere End Cap Fittings Model No. SC-1611 Surface Finish Hairline / Mirror / semi-gloss Colour color color yoqobo umbala SS304 / SS316 Dimension (mm) H: 25.5 Φ51 Isitifiketi se-ISO9001: Isicelo se-2015 / SGS Sisetshenziswa kakhulu ekuxhumaneni nasekulungisweni kwama-handrails ohlelweni lokuvikela i-guardrail Isitshalo Sethu Ithimba Lethu Izitifiketi Zethu Kungani usikhetha? 1, Singabantu ifektri (manuf ...
Engagqwali ikheshi Handrail, I-Handrail Base Plate, Wokugibela Handrail Bracket, Kuqondile Handrail Abakaki, Insimbi Engagqwali Handrail, Izandla zokubopha,